Sanchez Oo Niyadda Ka jebiyey Arsenal: “Waxaan Rabaa Champions League’
HomeWararka MaantaSanchez Oo Niyadda Ka jebiyey Arsenal: “Waxaan Rabaa Champions League’
Arsenal ayaa heshay farriintii ugu kululayd ee kaga timaadda xiddigooda Alexis Sanchez oo fasax kaga maqan kooxda, hase yeeshee la filayo inuu ka tago Gunners.
Tababare Wenger ayaa toddobaadkan u ballan-qaaday taageereyaasha in aanu Sanchez ka tegi doonin, laakiin waraysi uu siiyey idaacad ku taalla waddanka Chile oo uu fasax ku joogo, ayuu ku sheegay in uu u gudbiyey Arsenal go’aankiisa oo aan ka laabasho lahayn.
“Waxaan rabaa inaan ciyaaro Champions League. Go’aankuna mid aniga ii yaalla maaha, waxaan ka sugayaa Arsenal” Sidaas ayuu yidhi Sanchez, waxaanu intaas raaciyey: “Go’aan ayaan gaadhay, jawaabtana waxaan ka sugayaa Arsenal. Fikirkaygu waa in aan ciyaaro oo aan ku guuleysto Champions League, taas oo aan ku riyoon jiray illaa carruurnimadaydii”
rrintan ayaa u muuqata in Sanchez uu ka dalbaday Gunners in la fasaxo, taas daraadeedna waxay ku khasbanaan doonaan inay suuqa dhigaan gaar ahaana kooxaha Bayern Munich iyo Manchester City uu midkood ku biiro.
Gunners waxay sannadkii tegay ka gashay horyaalka Premier League kaalinta shanaad, kamana mid aha kooxaha sannadkan ciyaari doona Champions League, cudur daarka ugu weyn ee Sanchez-na waa in aanu dooneynin inuu ka maqnaado Champions League.
Champions League: 5 Kooxood Oo Ka Socda Wadanka Spain Oo Sannadkan Ka Qayb Geli Doona
28/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Watch Houston Astros vs Boston Red Sox
06/10/2017 Abdiwahab Ahmed